Fan Iyo Fikir (Qeybtii 3-aad) – IFIYE
Qaybinta Shaqaalaha waa kala-saaridda hawlaha nidaam kasta si markaa ka qaybgalayaashu ay khabiir u noqdaan. Shakhsiyaadka, Ururrada, iyo Qaramada ayaa ku guuleysta oo helaya karti gaar ah iyo qaab isku-dhafan si ay uga faa’iidaystaan ​​awooda dadka kale marka laga reebo midda iyaga u gaar ah.
Awoodda khaaska ah waxaa ku jiri kara qalab ama khayraad dabiici ah marka lagu daro xirfadaha iyo tababarka isku-dhafanaanta khayraadka. Qaybinta Shaqaalaha waa ujeeddada ganacsiga iyo isha dhaqaale ee ku tiirsanaanta xoogga dadka. Sababtoo ah qaddarka shaqaalaha badan ee la gaarsiiyay shaqooyinka gaarka ah ee warshadaha, qaar ka mid ah dhaqaaleyahanno iyo sidoo kale Injineerro farsamo yaqaan ah sida Charles Babbage waxa ay taageereen kala qaybsanaanta Shaqaalaha (Division of Labor).
Taariikh ahaan, qaybinta sii kordhaysa ee Shaqaalaha waxa ay la xiriirtaa koritaanka wadarta guud ee ganacsiga, kor u qaadista Caasimadaha iyo kakanaanta sii awoodeysaneysa ee geeddi-socodka warshadaha. Guud ahaan qeybinta shaqaalaha waxa ay Dhaqaaleyahannadu ku doodayaan in ay kordhiso khibradda shaqo ee shakhsiga.
Adam Smith, oo ah Dhaqaaleyahanka leh aragtidan waxa uu ku qeexayaa in loola jeedo u kala saaridda Shaqaalaha, Ururrada iyo Hay’adahaba mid waliba shaqada ay aqoonta u leedahay. Hor mar la’aanta maantay ka taagan xarumaheenna Dowliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahayba waxaa sabab u ah ‘Kala qeybin la’aanta Shaqaalaha’.
Bishii la soo dhaafay, sahan aan ku sameeyay dhowr Wasaaradood iyo dhowr Ganacsi waxaa iiga soo kala baxay laba arrimood:- Waa midda koowaad’e, Dowladdeennu waxaa ay wax ku Shaqaalaysaa nidaamkeenna guud ee Siyaasadeed; kolka kaa wax lagu Shaqaaleeyo waxaa meesha ka baxaya tayadii, aqoontii iyo ku habboonaantii shaqada; waxa aan ula jeedaa si kooban dadka sidaa lagu shaqaaleeyo ma garanayaan waajibaadkooda shaqo “Job deuties”.
Waa middan tan ragaadisay Xarumaheenna Dowliga. Shaqaaluhu waa ay iska fadhiyaan oo ka doodayaan amaba caayayaan halka ay u shaqeeyaan. Ma garanayo qofku waxa ay tahay saaka in uu qabto, oo loomaba cayimin markii horaba shaqo uu qabto.
Waxayba dhahaan “Meesha adigu lugta ii geli”. Tan macnaheedu muxuu noqon karaa? Midda labaad, Xamar waxa aad ugu badan Ganacsiga sida dhow u burbura. Arrintan daba gal aan ku sameeyay waxa aan ku ogaaday in ay jirto aqoon la’aan Maamulka shaqaalaha ah(Human Resource Management).
Tusaale, Maqaayadda Laami, waxaa ka shaqeeya 20 Adeege (Waiters) midkiiba waxa uu ku shaqeeyaa yoomiye $6. Qurac [Milkiilaha Maqaaxida] maalinkii waxaa Shaqaalaha uga baxdo $120. Bishiina waxaa uga baxdo $3,600. Lacagtan waxa ay uga baxdaa Adeegayaasha keliya.
Qiyaas immisaa uga baxdo bishi, Nadaafadda, Amnniga, iyo adeegga guud ee Maqaaxidiisa?Laami, waxa ay isticmaali kartay Shaqaale intan ka yar oo Mushaar intan ka yarna qaata. Waxa ay isticmaali kartaa 12 shaqaale ah oo midkiiba uu ku shaqeeyo $8. Maalinkii waxaa uga bixi lahaa $96, halka ay maalinkii ka baxdo $120. Keliya waxa uu yareeyay shaqaalaha.
Oo haddii uu yareeyo sow iman mayso in dadkii la qancin waayo?Maye. Shaqaalaha ayaa la qeybinayaa oo aragtida Adam Smith ee kala qeybinta shaqaalaha [Division of Labor] ayaa aan adeegsaneynaa. Mid walba meesha uu xirfad u leeyahay ayaa lagu qorayaa oo loo cayimayaa si is-daba oradkuna u yaraado Mushaarkuna u yaraado. Soomaaliya Shirkadaha guuleystay u fiirso, Hormuud waxa ay isticmaashaa Aragtidan kala qeybinta Shaqaalaha. Waa ay ku baraartay oo ku guuleysatay weliba. Plato, waxa uu yirahdaa, “Asalka dawlad-goboleedku waxa uu ku salaysan yahay sinnaanta dabiiciga ah ee bani’aadamnimada, taas oo ku jirta qaybinta Shaqaalaha”.
Geesta kale, Aqoonyahanki qarnigii 14aad Ibn Khaldum waxa uu ku nuux-dnuuxsaday muhiimada qaybinta Shaqaalaha ee habka wax-soo-saarka. Kooxdii Fanka ee Waaberina waxa ay ku heesi jireen:- “Hadal laga dardaarana,Ninka howl karnnimiyo,Laga dhigay hoggaanshoow,Kala hubi shaqaalaha,Huradayiyo ma seexdaha”.
Meerisyadan waxa ay ku baaqayaan in shaqaalaha la kala hufo oo la kala hubiyo iyada oo loo eegayo kartidooda iyo howl karnnimadooda. Sida guudnna Aragtidan Adam Smith ee kala qeybinta shaqaalaha [Division of Labor] waxa ay ku wareegaysaa uun in shaqaalaha kartidooda iyo howl karnnimadooda lagu kala qeybiyo. Ujeedka ugu weyn ee laga leeyahayna waxa ay tahay in qofka loo abuuro khibrad shaqo oo aanu noqon ku dul noole.